Terms and Conditions – Daung Capital
1. AGREEMENT FOR RENT
1.1 Daung Capital Co., Ltd (Owner) will rent the Goods and accessories described in the Agreement (Goods) to the Renter. The Goods include all registrations, brand marks, parts, additions, replacements, and renewals of the Goods or any part of the Goods made before or during the Term of the Agreement.
2.1 The Agreement states the Term of the rental.
3.1 Upon the execution of the Agreement, the Renter shall:
(a) pay to the Owner the deposit stated in item2of the Agreement; and
(b) deliver to the Owner (where appropriate), the necessary registration book/card or documents relating to the registration of the Goods.
3.2 All payments to the Owner shall be:
(a) despatched at the sole risk of the Renter and will only be credited to the Renter when received by the Owner; and
(b) made in full without any deduction, set-off, or withholding for taxes, levies, charges or any other reason.
3.3 If the Renter must make any deduction or withholding for any reason on any payment made to the Owner under the Agreement, the amount payable by the Renter is increased to the extent necessary to ensure that, after the making of such deduction or withholding, the Owner receivesanet amount equal to the amount the Owner would have received had no such deduction or withholding been required or made.
4.1 The time of all payments under the Agreement is of the essence.
Failure to pay when owed
4.2 If the Renter fails to pay any amount due under the Agreement when owed, and the Owner gives notice of default to the Renter, the Renter shall make full payment of all amounts owed at the time stated in the notice of default.
Failure to pay isamaterial breach
4.3 Failure to make payment in accordance with the notice of default given under Clause 4.2 (Failure to pay when owed) isamaterial breached the Agreement.
5. PENALTY FEE
5.1 If the Renter defaults on payment of any of the Instalments or other moneys due and payable under the Agreement, whether payment has been demanded or not, the Renter owes the Ownerapenalty fee as specified in Section B of the Agreement. The Renter owes the Owner the penalty fee for each day that the Instalment or other money due remains unpaid.
5.2 Nothing in Clause 5.1 (Penalty fee) will limit any other rights that the Owner may have against the Renter under the Agreement, subject to statutory provision or law.
6. EXAMINATION AND QUALITY
6.1 If the Goods are new, this Clause 6.1 (New Goods) shall apply;
(a) The Renter has inspected the Goods, and the Renter has found the Goods to be of merchantable quality, in good and proper order and fit for the purpose for which such Goods are commonly used. Except for any non-conformity or matter specifically drawn to the attention of the Owner in writing prior to the execution of the Agreement, all implied warranties and conditions regarding the fitness of the Goods are extinguished.
(b) The Renter has received and taken delivery of the Goods.
6.2 If the Goods are second-hand, this Clause 6.2 (Second-hand Goods) shall apply;
(a) The Renter is aware that the Goods are second-hand and that all conditions and warranties, whether express or implied, are extinguished. The Renter hereby confirms that this statement was brought to his notice before the execution of the Agreement.
(b) The Renter has examined the Goods prior to the execution of the Agreement and is satisfied that the Goods are in good and road-worthy (in the case ofamotor vehicle) condition and good state of repair and fit for the purpose required by him. The word “ second-hand” appearing herein means that the Goods are not new and have been in the ownership or possession of one or more persons before acquired by the Owner.
(c) The Renter has received and taken delivery of the Goods.
7.1 The Renter and the Owner agree to waive all implied conditions and warranties under the Sales of Goods Act 1930.
8.1 The Renter hereby agrees with the Owner as follows:
(a) To obtain delivery of the Goods at the Renter’s sole risk, cost and expense.
(b) To keep and maintain the Goods and all parts of the Goods in good and serviceable repair and condition and to replace all missing, damaged or broken parts of the Goods with parts of the same make, equal value and quality.
(c) To be solely responsible for any loss, destruction, or damage to the Goods or any part of the Goods, including loss, destruction, or damage caused by third parties, and destruction or damage caused by ordinary wear and tear.
(d) To make all repairs and replacements to the Goods required to keep the Goods in “ like new” condition. The Renter will pay for all repairs and replacements.
(e) To maintain any insignia identification marks, applications, plates or location tracking devices on the Goods as required by the Owner and that the Renter will not remove, deface, obliterate, cover up or conceal the insignia identification marks, applications, plates or location tracking devices.
(f) To give the Owner immediate notice in writing of any loss, damage, or destruction of the Goods or any part of the Goods, and provide full details of the loss, damage, or destruction and an explanation of how the loss, damage, or destruction occurred.
(g) The Owner may insure the Goods as policy owner during the Term against loss or damage by accident, fire, burglary, strikes, riots, civil commotion and theft and such other risks as the Owner may from time to time consider fit to the full insurable value of the Goods withareputable insurance company. The Renter authorises the Owner to receive all moneys payable under the insurance policy (if any). The Renter will not insure the Goods against any risk with another registered insurer without first informing the Owner.
(h) To permit the Owner, its employees or agents at any time to inspect or test the Goods and to give them reasonable and proper access to the Goods to enable them to do so.
(i) To pay punctually all fines, licence duties, taxes fees, registration charges and all other payments, if any, in respect of the Goods or the use of the Goods, and if such payments is made by the Owner (which the Owner may at its discretion but without any obligation to do so) to repay the Owner on demand. If the Renter fails to repay the Owner on demand,apenalty will be imposed in accordance with Clause5(Penalty Fee).
(j) To obtain and maintain all necessary licences, permits, permissions and similar approvals, whether governmental or otherwise in relation to the Goods and the use of the Goods.
(k) Not to use the Goods or allowathird party to use the Goods in any way contrary any law, rule, regulation or order or for any unlawful purpose or inaway that may result in the Goods becoming confiscated or forfeited.
(l) Not to allow any person other than skilled and qualified persons to operate or use the Goods.
(m) To keep the Goods in the possession and control of the Renter and not remove the same from the place where they were first installed as specified in the Agreement without the prior written consent of the Owner and if the Goods should consist ofamotor vehicle not to take or send the Goods out of Myanmar and not to transfer the registration of the Goods from one registry to another without the prior written consent of the Owner.
(n) To keep the Goods properly and safely housed, or if the Goods areamotor vehicle, safely garaged, and to inform the Owner by written notice of any change of the Renter’s address and/or of the place where the Goods are housed or garaged immediately when such change takes place.
(o) Not to make any alterations, additions or improvements to the Goods without the prior written consent of the Owner. All additions, replacements, or attachments made to the Goods with or without the consent of the Owner and of whatever kind or nature shall be deemed to be parts of the Goods and be the property of the Owner and subject to all the terms and conditions of the Agreement.
(p) The Renter will not sell, assign, sub-let, pledge, mortgage, charge or otherwise create or allow to be created any lien on the Goods for any reason. If the Renter breaches this sub-clause, the Owner is entitled (but will not be bound) to pay to any third party such sums as are necessary to procure the release of the Goods from any charge, mortgage or lien and the Owner is entitled to recover such sum from the Renter together withapenalty as provided in Clause5(Penalty Fee).
(q) That the Renter will not assign any of his/its rights, title or interest under the Agreement without the prior written consent of the Owner. The Owner will not withhold consent without reason. Asacondition of granting consent to an assignment of the right, title and interest of the Renter under the Agreement, the Owner is entitled to require that the Renter cure all defaults under the Agreement, and may require the Renter and its assignee:
(i) execute an assignment inaform approved by the Owner under which the assignee agrees with the Owner to:
(A) be personally liable to pay the remaining unpaid Instalments;
(B) fulfil all of the Renter’s obligations under the Agreement for the remainder of the Term; and
(C) indemnify the Renter in respect of those liabilities, and
(ii) pay all costs incurred by the Owner (including legal expenses) in preparing, drawing, stamping or registering the assignment agreement or counterparts.
(r) If the Goods are lost, stolen, destroyed or damaged due to the negligence or wrongful act ofathird party, the Renter shall notify the Owner immediately. The Renter will not settle or resolve any claim without the consent of the Owner and the Owner (if the Owner so desires) may take over or direct any negotiations (except in relation to claims of the Renter for personal injuries or damage to the property of the Renter unconnected with the Goods). The Renter must pay all expenses relating to the proceedings.
(s) Deliver all registration books, cards, or documents relating to the registration of the Goods to the Owner, if those registration books, cards, or documents are not already in the Owner’s possession. The Owner is entitled to retain all registration books, cards, or documents relating to the Goods during the Term. If the Owner agrees to the Renter’s request for the temporary release of any registration books, cards, or other documents the Renter undertakes to return the registration books, cards, or other documents to the Owner promptly at the time Agreed with the Owner, or upon demand by the Owner.
(t) If the Renter isacompany, the Renter must deliver to the Owner the Renter’s annual balance sheet, profit and loss account and income statement within3months of the end of the financial year. Additionally, the Renter must deliver to the Owner the audited copy of each of the document listed above for the preceding financial year and such quarterly and/or interim reports and/or other reports filed with applicable governmental authorities within6months of the end of the Renter’s financial year.
(u) The Renter will pay any taxes, levies or charges as required by law in respect of any sums payable to the Owner under or relating to the Agreement. If the Owner is required to pay any taxes, levies or charges under the Agreement or in relation to the Goods, the Renter must reimburse the Owner on demand the amount of all such taxes, levies or charges, except to the extent prohibited by law.
9. ASSIGNMENT BY OWNER
9.1 The Owner assign all its right title and interest in the Goods or under the Agreement together with all moneys now payable that will become payable under the Agreement to any other legal or natural person, including the right of the Owner to enter upon premises and to inspect and/or repossess the Goods.
10.1 The Owner may terminate the Agreement, and immediately repossess the Goods if any of the following events occur:
(a) the Renter defaults on payment of any of the Instalments, and such default continues foraperiod of5Business Days after delivery of the notice of default;
(b) the Renter or any Guarantor breaches any provision, or fails to observe or perform any obligation, under the Agreement;
(c) an encumbrancer takes possession of oratrustee, receiver and/or manager, judicial manager or similar officer is appointed in respect of any assets or property of the Renter or any Guarantor or any distress or any form of execution is levied or enforced upon or sued against such assets or property;
(d) the Renter or any Guarantor becomes or is declared insolvent or convenesameeting of creditors or proposes or make any arrangement or composition with or any assignment for the benefit of its creditors;
(e) if the Renter isacompany, any proceedings are commenced oraresolution is passed for the liquidation or winding-up (whether compulsory or voluntary) or for the bankruptcy (as the case may be) of the Renter or any Guarantor;
(f) any provision of the Agreement is or becomes for any reason unenforceable or invalid;
(g) the Renter or any Guarantor is convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
(h) there isamaterial adverse change in the condition (financial or otherwise) of the Renter, the Guarantor or ifacorporate, any of their respective subsidiaries which in the opinion of the Owner might materially affect the Renter’s and/or the Guarantor’s continued operations or business;
(i) the Renter or the Guarantor threatens to cease, or ceases, its business;
(j) any cheque given by the Renter as deposit or as payment of any of the Instalments or any part thereof is dishonoured;
(k) there isareduction in the value of the Goods other than due to usual depreciation; or
(l) in the opinion of the Owner, its interests under the Agreement is or becomes adversely affected.
Owner’s rights upon termination
10.2 If the Owner terminates the Agreement under Clause 10.1 (Immediate termination), the Owner may, without prejudice to the rights and claims that the Owner may have against the Renter and any Guarantor:
(i) resume possession of the Goods and all necessary licences registration books, cards or certificates policies and certificates of insurance and other documents (if any) relating to the Goods; or
(ii) if the Owner is unable to resume possession of the Goods for any reason, the Owner may declare in writing:
(A) that the rental created by the Agreement is terminated and the Renter is no longer entitled to possess the Goods;
(B) that the Renter does not have any rights to the Goods; and
(C) that the Renter must return the Goods together with all necessary licences, registration books, cards, or certificates policies and certificates of insurance, user manuals, instruction booklets and any other documents relating to the Goods to the Owner.
11. ENTRY INTO PREMISES
11.1 Without prejudice to Clause 8.1(h), and for the purpose of taking possession of the Goods in accordance with the provisions of the Agreement, the Renter agrees that the Owner its employees and agents are entitled to enter the Renter’s premises or other place occupied by the Renter in which the Goods are located at the time of taking possession.
12. RENTER’S INDEMNITIES TO OWNER
12.1 The Renter agrees to indemnify the Owner in full against all:
(a) costs, charges, expenses and liabilities paid or incurred by the Owner in relation to any loss, damage, repair, preservation, recovery or repossession of the Goods or enforcement of this Agreement including all legal costs.
(b) losses or damages resulting or arising from the confiscation, impoundment or forfeiture of the Goods by the police or any other governmental authorities for any reason. The Renter will continue to pay all Instalments as and when they become due even in such an event.
(c) losses, damages, costs incurred by and proceedings, claims, demands and actions made against the Owner by reason of any loss, injury or damage suffered by any person or party (which expressions shall include the Renter) from the rental, possession, ownership, custody, maintenance or use of the Goods.
13. RENTER’S LIABILITY ON REPOSSESSION
13.1 If the Owner takes possession of the Goods, the Owner is entitled to recover from the Renter as liquidated damagesasum equivalent to:
(a) the “ Total Amount Payable” specified in item5of the Agreement and any penalty fees assessed under Clause5(Penalty Fee), minus
(b) the sum of all the Instalments and penalty fees paid to and received by the Owner and the value of the Goods at the time of the Owner takes possession of the Goods.
14. ARTICLES IN REPOSSESSED/RETURNED GOODS
Articles with the Goods
14.1 If the Renter returns the Goods, or the Owner repossess the Goods, the Owner will not be responsible or liable for any property or article left with or attached to the Goods.
Sale and disposal of property
14.2 If the Owner finds such property or article with the Goods, but not attached to the Goods, the Renter may collect the property within7days from the date of repossession or return of the Goods to the Owner. If the Renter fails to collect the property within7days, the Owner may sell or otherwise dispose of the property. If the Owner sells the property, the Owner will credit the net proceeds from the sale of the property to the account of the Renter. The Owner is not under any liability to maximize profits in relation to the sale of the property with, but not attached to, the Goods.
Indemnity for sale or disposal of property
14.3 The Renter agrees to indemnify the Owner against any claims by any third party in respect of any property sold or disposed of under Clause 14.2 (Sale and disposal of property).
15. LOSS, DAMAGE TO OR DESTRUCTION OF THE GOODS
15.1 The Renter will remain fully liable under the Agreement if the Goods are stolen, destroyed, or damaged. The Agreement is not discharged by theft, destruction of damage to the Goods. The Renter will continue to pay all Instalments as and when they become due even if the Goods are stolen, destroyed, or damaged.
15.2 If the Goods are lost, stolen, destroyed or damaged during the Term of the Agreement and if such loss or damage is, in the sole opinion of the Owner, capable of replacement or repair, then without prejudice to Clause 8.1(g) hereof, all insurance moneys payable to the Owner under the insurance policy will be applied towards replacing or repairing the Goods.
Incapable of replacement or repair
15.3 If the Owner is of the opinion that the Goods are incapable of replacement or repair, all insurance moneys payable to the Owner under the insurance policies will be applied in the following manner:
(a) firstly, towards payment to the Owner of the unpaid balance of the sum stated in item5of the Agreement together with any penalty payments due and all other sums due to the Owner under the Agreement;
(b) secondly, towards payment of any legal costs incurred by the Owner; and
(c) thirdly, payment of any surplus thereof to the Renter.
15.4 In accordance with Clause 15.1 (No discharge), after the Owner receives the insurance moneys under the policy, if any part of the balance of:
(a) the sum stated in item5of the Agreement; or
(b) penalties and any other moneys payable under the Agreement,
remains unpaid, the Renter will remain liable to pay the Owner the balance.
16.1 If the Renter has observed and performed all the express and implied terms and conditions of the Agreement and has paid to the Owner all sums of money payable to the Owner when due, at the end of the Term of the rental the Renter is entitled to exercise one of the two following options:
(a) First option: The Renter can choose to return the Goods to the Owner. If the Goods are ofasatisfactory condition as determined by the Owner, the Owner will refund the initial deposit listed in item2of the Agreement back to the Renter.
(b) Second option: The Renter can purchase the Goods and become the absolute owner of the Goods. Asaconsideration for the purchase, the Renter acknowledges that the Renter is paying consideration to the Owner in the form of non-refundable deposit and non-refundable rent at the agreed upon monthly amounts set forth in the Agreement.
17. FURTHER TERMS AND CONDITIONS
Terms and conditions in favour of Owner
17.1 The terms and conditions contained in the Agreement in favour of the Owner are in addition to, and not in substitution for, the terms and conditions implied in favour of the Owner unless the implied terms and conditions are inconsistent with the terms and conditions of the Agreement.
Implied liability of Owner excluded
17.2 Unless the Agreement states otherwise, any express or implied liability the Owner might incur relating to the Goods or to their merchantable quality or suitability or fitness foraparticular purpose are excluded.
Immunity of Renter excluded
17.3 Unless the Agreement states otherwise, any express or implied right or immunity that the Renter might obtain in respect of any conditions, warranties, or representations relating to the Goods or to their merchantable quality or suitability or fitness foraparticular purpose are hereby excluded.
17.4 Unless the Agreement states otherwise, the Owner will not incur any liability to the Renter and the Renter is not entitled to rescind the Agreement if the Goods delivered to the Renter do not correspond to their description as contained in the Agreement.
Owner not liable for loss or injury
17.5 The Owner is not liable in contract or in tort for loss, injury or damage sustained by because of any non-conformity or defect in the Goods. It is immaterial if the non-conformity or defect is latent or apparent on examination by the Renter.
Owner not liable for claims made against Renter
17.6 The Owner is not liable to the Renter for any claims made against the Renter by any third party for any loss, injury or damage.
Dealers not agents
17.7 Unless the Agreement states otherwise, the dealers, the suppliers, credit-brokers and the employees of those parties who negotiated the Agreement or supplied the Goods are not agents of the Owner.
Failure to enforce accrued rights
18.1 Failure by the Owner or the Renter to enforce any accrued rights under the Agreement is notawaiver of those rights unless the waiving party acknowledges the waiver in writing. No course of dealing between parties shall operate asawaiver of any rights under the Agreement. The rights and remedies provided in the Agreement are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies (whether provided by law or otherwise).
18.2 The Owner may waive or consent to any breach of any provision of the Agreement by the Renter. Any waiver or consent given by the Owner under any provision of the Agreement will only be effective if in writing. The Owner may make any such waiver or consent subject to any conditions the Owner thinks fit. All waivers and consents will be effective only for the purpose for which it is given.
Time or indulgence given
18.3 Any liability to the Owner under the Agreement may in whole or in part be released, compounded or compromised, or time or indulgence given, by the Owner in its absolute discretion as regards the Renter without in any way prejudicing or affecting the Owner’s other rights against the Renter under the same oralike liability.
19. TERMINATION BY RENTER
Termination through acceleration
19.1 The Renter may at any time during the Term exercise either option by making good any existing defaults of the Renter under the Agreement and accelerating payments under the Agreement by paying the Ownerasum calculated in accordance with Section A of the Agreement. In the event of purchase, the Renter forfeits the cash deposit in item2and the Owner will, at the request of the Renter, assign all the Owner’s rights, title and interests in the Goods to the Renter but until the Owner does, the Goods will remain the sole and absolute property of the Owner.
19.2 This Agreement is notapurchase agreement, nor an agreement for the purchase of the Goods by the Renter.
Termination by delivery
19.3 Alternatively, the Renter may terminate the Agreement by delivering to the Owner:
(a) the Goods in good order, repair and condition;
(b) all additions, alterations, and improvements as shall have been made to the Goods; and
(c) all necessary licences, registration books/cards or certificates, policies and certificates of insurance, user manuals, instruction booklets and other documents (if any) relating to the Goods,
during ordinary business hours.
Payment of fees due
19.4 Upon termination, the Renter must pay to the Owner the amount the Owner would have been entitled to recover from the Renter if the Owner had resumed possession of the Goods on the date on which the Renter returned the Goods as provided for in Clause 13 (Renter’s liability on repossession).
20. RECONSTRUCTION OR AMALGAMATION
20.1 The Owner and the Renter (in the case of the Renter beingacompany), may engage in corporate reorganizations, and such reorganizations will not be consideredabreach of the Agreement, if the rights and obligations under the Agreement remain fully intact.
21.1 The records of the Owner (including electronic, computer and microfilm stored records) of all matters relating to the Agreement and any certificate from the Owner stating the liability of the Renter to the Owner as at any specified date shall be final, conclusive and binding on the Renter for all purposes whatsoever save for fraud or manifest error.
22.1 The Renter must notify the Owner of any change of address in writing.
22.2 The Owner may serve any notice, demand, writ of summons, statement of claim, statutory demand, bankruptcy application or any legal, enforcement or bankruptcy process in respect of any claim, action or proceeding (including legal, enforcement and bankruptcy proceedings) or other communication relating to this Agreement on the Renter by:
(a) hand delivery to any of the Renter’s officers or partners or the Renter personally;
(b) by letter sent by post addressed to the Renter and left at the Renter’s registered office or place of business or its/his address stated in this Agreement (or such other change of address as notified in writing to the Owner); or
(c) by email or other means of written electronic messaging.
22.3 and shall be deemed to have been served:
(a) at the time given if served on the Renter if delivered at the Renter’s office or partners or on the Renter personally, or if delivered by email or other means of written electronic messaging;
(b) at 10 a.m. (Myanmar time) on the Business Day next following the date of posting or if sent to an address inside Myanmar; and
(c) at 10 a.m. (Myanmar time) on the third Business Day next following and exclusive of the date of posting if sent to an address outside of Myanmar.
Service of updates
22.4 The Owner may deliver other updates to these General Terms and Conditions, and other important information relating to the Rental to the Renter by:
(a) posting such change(s) on the Owner’s website;
(b) any method permitted under Clause 22.2 (Giving notice); or
(c) such other means of communication as the Owner may determine in its absolute discretion.
1.1 Ifaprovision of this Agreement is invalid or unenforceable inajurisdiction:
(b) it does not affect the validity or enforceability of:
(i) that provision in another jurisdiction; or
(ii) the remaining provisions.
1.2 This Agreement sets out the entire agreement and understanding of the parties and is in substitution of any previous written or oral agreement between the parties.
25. APPOINTMENT OF AGENTS
1.3 The Owner may appoint agents and or contractors to carry out, exercise, or procure the carrying out of any of the Owner’s obligations, rights or powers under this Agreement.
1.4 The Renter consents for the Owner and any officer of the Owner to disclose any information relating to the Renter as the Owner shall consider appropriate to:
(a) any person to whom its disclosure is permitted or required by any statutory provision or law; or
(b) any other person wherever situate for any purpose whatsoever,
and it is hereby agreed that the Owner and any officer of the Owner may disclose the foregoing information to the fullest extent permitted by any other statutory provision or law.
Disclosure to credit bureaus
1.5 Without prejudice to Clause 26.1 (Disclosure generally), the Renter consents to such disclosure to any credit bureau or any other organisation or corporation set up for the purpose of collecting and providing information relating to the credit standing of persons, and to the disclosure by such credit bureau or other organisation or corporation to any member thereof, for the purposes of assessing the Renter’s credit worthiness or for any other purpose whatsoever.
1.6 This consent and provision shall survive the termination of this Agreement or any or all of the Renter’s accounts with the Owner and/or the termination of any relationship between the Renter and the Owner, for any reason whatsoever.
27.1 When interpreting the Agreement and these General Terms and Conditions, the following concepts and definitions shall be applied:
(d) where there are two or more persons included in the expression the “ Renter” such persons shall be deemed to be jointly and severally liable;
(e) “ Business Day” means any day other thanaSaturday, Sunday or public holiday in Myanmar;
(a) all references to “ MMK” shall be to the Myanmar currency;
(b) “ Guarantor” means any person or party givingaguarantee or any other form of support or collateral in favour of the Owner under the Agreement; and
(c) the headings to the clauses in this Agreement are included for ease of reference only and shall in no way affect the construction or interpretation of this Agreement.
28.1 For the avoidance of doubt, the Renter acknowledges that:
(a) the Renter has examined the Goods and the Goods are in good order and in good working condition and to the Renter’s satisfaction in every respect; and
(b) the Renter has taken delivery of the Goods in good order and in good condition on the date of this Agreement.
28.2 The Renter makes the following representations and warranties to the Owner:
(a) Powers and authority: It has the power to enter into and perform and has taken all necessary action to authorise the entry into, performance and delivery of this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement.
(b) Legal validity: This Agreement constitutes its legal, valid and binding obligation enforceable in accordance with its terms.
(c) Authorisations: All consents approvals authorisations required or desirable in connection with the entry into, performance, validity and enforceability of this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement have been obtained or effected and are in full force and effect.
29.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Myanmar. The parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts in Myanmar but the Owner will be at liberty to proceed against the Renter in any court in any other jurisdiction.
30. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES)
30.1 A person who is notaparty to this Agreement has no right under the Agreement to enforce any term of this Agreement.
31.1 The Owner may amend any of these General Terms and Conditions, any of the terms of the Agreement (including any of the terms set out in the Agreement or in these General Terms and Conditions) and any such amendment shall be binding on the Renter and shall take effect upon notice of the said amendment being served on the Renter in accordance with Clause 22.2 (Giving notice).
၁။ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု
Daung Capital Co., Ltd (ပိုင်ရှင်) မှ ဤ သဘောတူစာချုပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို ငှားရမ်းသူထံသို့ ငှားရမ်းမည် ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းတွင် ဤ စာချုပ်မတိုင်မီ နှင့် စာချုပ်သက်တမ်း ကာလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်များအားလုံး ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်ပုံစံများအားလုံး ၊ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး ၊ နောက်ထပ်ထည့်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများအားလုံး ၊ အစားထိုး လဲလှယ်မှုများ အားလုံး နှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းများအားလုံး သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းမဆို ပါဝင်သည်။
၂။ ငှားရမ်းမှု ကာလသက်တမ်း
ဤ စာချုပ်တွင် ငှားရမ်းမှုသက်တမ်းအား ဖော်ပြထားသည်။
၃.၁ ဤစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးသည်နှင့် ငှားရမ်းသူသည်
(က) သဘောတူစာချုပ် အချက် (၂) တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း စရန်ငွေကို ပိုင်ရှင်အား ပေးသွင်းရ မည်ဖြစ်ပြီး
(ခ) လိုအပ်သော မှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ကဒ်ပြား သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ကို ပိုင်ရှင်ထံသို့ (သင့်လျော်သည့် အချိန်တွင်) ပေးအပ်ရ မည်။
၃.၂ ပိုင်ရှင်ထံသို့ ငွေပေးချေမှုများ ဆောင်ရွက်ရာ၌
(က) ပိုင်ရှင်ထံငွေပေးပို့ရာတွင် ဆုံးရှုံနိုင်ခြေသည် ငွေချေးသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်က ငွေလက်ခံ ရရှိ မှ သာ ပေးသွင်းမှုကို စာရင်းထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။
(ခ) ပိုင်ရှင်အား ပေးသွင်းရမည့် ငွေကြေးများကို မည်သည့် အခွန်၊ အကောက်၊ ကျခံရမည့်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့်အကြောင်းကြောင်းမှ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခုနှိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူ ထားခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ဘဲ အပြည့်အ၀ ပေးသွင်းရပါမည်။
၃.၃ ဤ စာချုပ်အရ ငှားရမ်းသူမှ ပိုင်ရှင်ထံသို့ပေးရမည့် ငွေပမာဏအား မည်သည့်အကြောင်းဖြင့်မဆို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုပါက ယင်းသို့ ဖြတ် တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် နုတ်ယူခြင်းတို့မရှိခဲ့လျှင် ပိုင်ရှင်မှရရှိမည့် အသားတင် ပမာဏအတိုင်း ပိုင် ရှင်အား ရရှိစေရန်အတွက် ငှားရမ်းသူက ပေးချေရမည့်ငွေပမာဏကို ထပ်တိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၄။ အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မှု
ငွေပေးချေမှုများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်
၄.၁ ဤ စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် ငွေပေးချေမှုများအားလုံးကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရ မည်။
ငွေပေးချေရန်ရှိသည့် အချိန်တွင် ငွေပေးချေရန် ပျက်ကွက်မှု
၄.၂ ငှားရမ်းသူမှ ဤ စာချုပ်အရ ပေးရန်ရှိသည့် ငွေအား ပေးချေရမည့် အချိန်တွင် ပေးချေရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ လျှင် ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်းသူထံသို့ ငွေပေးချေရန် ပျက်ကွက်မှု နို့တစ်စာကို ပေးပို့မည် ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းသူ သည် ၎င်းးမှပေးချေရမည့် ငွေပမာဏအားလုံးကို ယင်းနို့တစ်စာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချိန်တွင် အပြည့်အဝ ပေးချေရမည်။
ပေးချေရန် ပျက်ကွက်မှုသည် စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြစ်သည်
၄.၃ အပိုဒ်ခွဲ ၄.၂ (ငွေပေးချေရန်ရှိသည့် အချိန်တွင် ငွေပေးချေရန် ပျက်ကွက်မှု) အရပေးသည့် ငွေပေးချေ ရန် ပျက်ကွက်မှု နို့တစ်စာနှင့်အညီ ငွေပေးချေရန် ပျက်ကွက်မှုသည် စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုပင် ဖြစ် သည်။
၅.၁ ငှားရမ်းသူက ယခုသဘောတူညီမှုစာချုပ်အရ အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားပေးရန် ကျသင့်သည့် ငွေတို့ကို ပိုင်ရှင်က တောင်းဆိုသည့် ဖြစ်စေ မတောင်းဆိုဘဲဖြစ်စေ ပေးချေရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ဤသဘောတူစာချုပ် အပိုင်း (ခ) တွင်ဖော်ပြထားသည့် ဒဏ်ကြေးကို ငှားရမ်းသူ မှ ပေးဆောင်ရမည်။ ယင်းသို့ ပေးရန်ကျသင့်သည့် အရစ်ကျပေးသွင်းရမည့်ငွေ သို့မဟုတ် အခြားပေးရန် ကျသင့်သည့် ငွေတို့ကို ပေးချေရန်အချိန်ကျရောက်သည့် နေ့မှ အကျေပေးချေသည့်အချိန်အထိ နေ့စဉ် ဒဏ်ကြေးတက်နေမည်ဖြစ်သည်။
၅.၂ အပိုဒ်ခွဲ ၅.၁ (ဒဏ်ကြေးပါ) သတ်မှတ်ချက်များသည် ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်းသူအပေါ်တွင် ဤ စာချုပ်အရသော်လည်းကောင်း ၊ ဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ပြဋ္ဌာန်းချက် အရသော်လည်းကောင်း သို့မ ဟုတ် ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း ရှိသည့် မည်သည့် အခွင့်အရေးကိုမဆို ကန့်သတ်လိမ့်မည် မဟုတ် ပေ။
၆.၁ ကုန်ပစ္စည်းသည် အသစ်ဖြစ်ပါက ဤ အပိုဒ်ခွဲ ၆.၁ (ကုန်ပစ္စည်းအသစ်) နှင့် သက်ဆိုင်သည်-
(က) ငှားရမ်းသူက ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းသို့စစ်ဆေးရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ သည် ရောင်းချနိုင်သည့် အရည်အသွေးရှိခြင်း ၊ ကောင်းမွန်သင့်လျော်သည့် အခြေအနေ တွင်ရှိခြင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက် နှင့် မကိုက်ညီမှု သို့မဟုတ် ဤ စာချုပ်မချုပ်ဆို ပိုင်ရှင်အား စာဖြင့်ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားသော ကိစ္စရပ် များမှလွဲ၍ ကုန်ပစ္စည်း၏ ကြံခိုင်မှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သွယ်ဝှက်ညွှန်းဆိုထားသော အာမခံမှုများ နှင့် သတ်မှတ် ချက်များသည် ကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သည်။
(ခ) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့မှုအား လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ကုန်ပစ္စည်းများက တပတ်ရစ်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်လျှင် ဤ အပိုဒ်ခွဲ ၆.၂ (တစ်ပတ်ရစ် ကုန်ပစ္စည်း) နှင့် သက်ဆိုင်သည်
(က) ကုန်ပစ္စည်းသည် တစ်ပတ်ရစ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ယင်းကုန်ပစ္စည်း၏ အတိအလင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝှက်ညွှန်းဆိုထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အာမခံချက်များသည် ဖယ်ရှားပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို ငှားရမ်းသူမှ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းသူသည် အထက်ပါဖော်ပြချက်ကို ဤသဘောတူစာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ်ီ ကပင်သိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
(ခ) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ယခု စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီကပင် စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်း များသည် (မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင်) ကောင်းမွန်ပြီး လမ်းတွင်မောင်းနှင်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိ ကြောင်း ၊ ကောင်းစွာပြုပြင်ထားကြောင်း နှင့် ၎င်းသတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်လျော် ကြောင်း လက်ခံပြီးဖြစ်သည်။ “ တစ်ပတ်ရစ်” ဟူ၍ ဤတွင်ရည်ညွှန်းသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများသည် အသစ်မဟုတ်ကြောင်း ယင်းတို့အားပိုင်ရှင်မှ မဝယ်ယူခင်က ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက် ပို၍ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(င) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့မှုအား လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။
၇။ အာမခံချက်များကို ထုတ်ပယ်ခြင်း
၇.၁ ငှားရမ်းသူ နှင့် ပိုင်ရှင်တို့သည် သွယ်ဝှက်ညွှန်းဆိုထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အာမခံချက်များကို ၁၉၃၀ ခုနှစ် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေအရ စွှန့်လွှတ်ကြသည်။
၈။ ငှားရမ်းသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
၈.၁ ငှားရမ်းသူသည် ဤတွင် ပိုင်ရှင်နှင့် အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီကြပါသည်-
(က) ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ ဖြန့်ဝေမှု ဆိုင်ရာ ထိခိုက်၊ စရိတ်၊ ကုန်ကျမှုများကို ငှားရမ်းသူကသာ တာဝန်ယူ ကုန်ကျခံရမည်။
(ခ) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို ကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေ နှင့် ပြုပြင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည့် အနေအထားဖြစ်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရှိရ မည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော ၊ ထိခိုက်သွားသော သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့သွားသော အစိတ်အပိုင်းများ ကို တစ်ကုမ္ပဏီတည်းမှ ထုတ်လုပ်သော တန်ဖိုးတူ ၊ အရည်အသွေးတူသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အစားထိုးထည့်သွင်းပေးရမည်
(ဂ) ကုန်ပစ္စည်းတွင်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို အခြားသူ များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် ပျောက်ဆုံးမှု ၊ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုကိုမဆို သို့မဟုတ် သာမာန် ကာလညောင်း၍ ယိုယွင်းမှုကြောင့် ဖြစပေါ်လာသော မည်သည့် ပျက်စီးမှု သို့ မဟုတ် ထိခိုက်မှုကိုမဆို ငှားရမ်းသူမှသာ တာဝန်ယူရမည်။
(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအား “ အသစ်ကဲ့သို့” အခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်မှုများ နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်မှုများကို ပြုလုပ်ရမည်။ ပြုပြင်မှုများ နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်မှုများအတွက် ငှားရမ်း သူမှ ကျခံရမည်။
(င) ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် တံဆိပ်ဖော်ပြချက် အမှတ်အသားများ၊ သုံးစွဲမှုများ၊ နံပါတ်ပြားများ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်ကသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ခြေရာခံကိရိယာ ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်နှင့် ငှားရမ်းသူက ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ပုံပျက်စေခြင်း၊ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် သိုဝှက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(စ) ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ ပျောက်ဆုံးမှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးမှု တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်ကို စာဖြင့်ရေးသား၍ ပိုင်ရှင်ထံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြား ရမည့် အပြင် ပျောက်ဆုံးမှု ၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု မည်သို့ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းချက် ပေးရမည်။
(ဆ) မီးလောင်ခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ လူထုအုံကြွမှု၊ ခိုးယူမှုတို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း ပျောက်ဆုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု နှင့် ပိုင်ရှင်က တန်ဖိုးအပြည့်အဝ အာမခံထားရန် သင့်လျှော်သည်ဟု အခါအားလျှော်စွာ မှတ်ယူသော အခြားအလားတူ ကိစ္စရပ်များအတွက် အငှားကာလအတွင်း နာမည်ရသော အာမခံ ကုမ္ပဏီတခုတွင် ပိုင်ရှင်မှ ပေါ်လစီပိုင်ရှင်အဖြစ် အာမခံထားရှိနိုင်သည်။ ငှားရမ်းသူသည် ထိုပေါ်လစီအရ ပေးချေရမည့် ငွေကြေး အားလုံး ပိုင်ရှင်က ရယူနိုင်အောင် ခြွင်းချက်မရှိ အခွင့်အာဏာပေးရမည်။ ငှားရမ်းသူသည် ယခုသဘောတူညီမှု ကာလအတွင်းတွင် ပိုင်ရှင်အား ဦးစွာ သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ အခြားအာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် မည်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအတွက်မျှ အာမခံထားခြင်း မပြုလုပ်ရ။
(ဇ) ပိုင်ရှင်ကိုလည်းကောင်း ယင်း၏အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုလည်းကောင်း ပစ္စည်းများကို အချိန်အရွး စစ်ဆေးကြည့်ရှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်နိုင်အောင် ခိုင်လုံသင့်လျော်သော အခွင့်အရေး စီမံဆောင်ရွက်မှုများ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(ဈ) ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ယင်းကို အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း မည်သည့် ဒဏ်ကြေးများ၊ လိုင်စင်ကြေးများ၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများနှင့် အခြား ပေးချေရန်ငွေအားလုံးကိုမဆို အချိန်မှန်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤ ပေးချေမှုများကို ပိုင်ရှင်ကပေးချေခဲ့ပါက (ပိုင်ရှင်က မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက် ပေးချေနိုင် သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်မရှိပေ) ယင်းကုန် ကျစရိတ်များကို ပိုင်ရှင်ကပြန် တောင်းဆိုလျှင် ပိုင်ရှင်အား ပြန်ပေးရမည်။ ပိုင်ရှင်ပြန်တောင်းဆိုချိန်တွင် ငှားရမ်းသူမှ ပေးရန် ပျက်ကွက်လျှင် အပိုဒ်ခွဲ ၅ (ဒဏ်ကြေး) နှင့် အညီ ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခံရမည်။
(ည) လိုအပ်သည့်လိုင်စင်များ၊ ပါမစ်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် အလားတူ စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကို အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ အခြားကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ယင်းကို အသုံးပြုမှုနှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ရယူထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။
(ဋ္ဋ) မည်သည့် ဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သို့မဟုတ် အမိန့်နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်မဆို ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့အသုံးပြုရန် အခြားသူ အားခွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်အခြားသူအား ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအား သိမ်းယူခံရခြင်း သို့မဟုတ် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး ခံရမည့် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် မဆို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကို မပြု လုပ်ရ။
(ဌ) ကုန်ပစ္စည်းကို တတ်ကျွမ်းသူ အရည်အသွေးပြည့်မီသူမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခွင့် မပြုရပါ။
(ဍ္ဍ) ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမြဲထာဝရ ငှားရမ်းသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် ထားရှိရန်နှင့် ပိုင်ရှင်အား ဦးစွာစာရေးသား ခွင့်တောင်းခြင်း မပြုဘဲ ဤသဘောတူ စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ထားရှိသည့်နေရာမှ အခြားနေရာများသို့ မရွှေ့ပြောင်းရန်၊ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများ သည် မော်တော်ယာဉ်ပါဝင်နေလျှင် မော်တော်ယာဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပသို့ ယူဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်ထံ စာဖြင့်ကြိုတင်ရေးသားခွင့်ပြုချက် ရယူခြင်းမရှိဘဲ ယင်းယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာနတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
(ဎ) ကုန်ပစ္စည်းများကို ကောင်းမွန်စွာ နှင့် လုံခြုံစွာထားသို သိမ်းဆည်းရန် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများသည် မော်တော်ယာဉ် ဖြစ်နေပါက လုံခြုံစွာဂိုထောင်ထဲ ထည့်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ ငှားရမ်းသူ၏ လိပ်စာ အပြောင်းအလဲရှိပါက နှင့်/သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ သိုလှောင် သို့မဟုတ် ဂိုထောင်ထဲထည့်သည့်နေရာ အပြောင်းလဲရှိပါက ပိုင်ရှင်ထံသို့ ချက်ချင်းစာရေးအကြောင်းကြား ရပါမည်။
(ဏ) ကုန်ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်အား ကြိုတင် စာရေးသား ခွင့်တောင်းခြင်းမပြုဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း ထပ်ဖြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မိုးမံခြင်း တို့မပြုလုပ်ရပါ။ ပိုင်ရှင်၏သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်ဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြစ်စေ ပြုလုပ်ထားသော ထပ်ဖြည့်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် တွဲစပ်ထားခြင်းများအားလုံးသည် မည်သည့်အမျိုးအစား၊ မည်သည့် သဘာဝမျိုးဖြစ်စေ ပိုင်ရှင်၏ ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အကျုံးဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(တ) ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်စေ အခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း၊ အာမခံအဖြစ်ထားရှိခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်ထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၄င်းမှ ရရှိသော အတိုးကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအား ထိန်းသ်ိမ်းထားရှိခွင့် (lien on the goods) သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း မရှိစေရ။ ဤအပိုဒ်ခွဲ စည်းမျဉ်းကို ငှားရမ်းသူက ဖောက်ဖျက်ခဲ့လျှင် ပိုင်ရှင်က တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ကုန်ပစ္စည်းအား ပြန်လည်ရယူရန် အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်ထားရှိခြင်း၊ အပေါင်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအားထိန်းချုပ်ခွင့်တို့အတွက် (ယင်းသို့ပေးချေရန် တာဝန်မရှိသော်လည်း) လိုအပ်သည့်ပေးချေမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အဆိုပါငွေကို အပိုဒ် ၅ (ဒဏ်ကြေး) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ကြေးနှင့် တကွ ငှားရမ်းသူထံမှ ပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
(ထ) ပိုင်ရှင်၏စာဖြင့် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ငှားရမ်းသူသည် ဤသဘောတူစာချုပ်အရ ရရှိထားသော မိမိ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားတို့ကို လွှဲပြောင်းပေး အပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ယင်းသဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိဘဲ ပေးအပ်ရန် ငြင်းဆန်ခြင်း မပြုရ။ ဤသဘောတူစာချုပ်အရ ငှားရမ်းသူ၏ အခွင့်အရေး၊ ပိုင်ဆိုင်ွင့်နှင့် အကျိုးအမြတ်တို့ကို ပေးအပ်ရန် သတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ပိုင်ရှင်သည် ဤသဘောတူစာချုပ်အရ ပျက်ကွက်မှုများအားလုံးအတွက် ငှားရမ်းသူအား ကုစားစေ ပြီး ငှားရမ်းသူနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း ခံရသူကို အောက်ပါအချက်များအား လိုက်ပါ ဆောင်ရွက် စေနိုင်သည်-
(၁) လွှဲပြောင်းပေးအပ်သူက အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူသည့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု (Assignment) တစ်ခုကို ပိုင်ရှင် သဘောတူလက်ခံသည့် ပုံစံဖြင့်ချုပ်ဆိုရမည်
(က) ကျန်ရှိနေသေးသည့် မပေးချေရသေးသော အရစ်ကျငွေပေးချေမှုများအတွက် ကိုယ် တိုင်တိုင်ကိုယ်ကျ တာဝန်ရှိုခြင်း
(ခ) ဤ စာချုပ်ပါ ငှားရမ်းသူ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျန်ရှိသည့် စာချုပ်သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်
(ဂ) လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းခံရသူက ငှားရမ်းသူကို ပေးရန်တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ နစ်နာကြေးပေးခြင်းအပြင်
(၂) လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု (Assignment) သဘောတူညီချက်နှင့် ၎င်းမူတူကွဲကို ရေးဆွဲ တံဆိပ်ခေါင်းကပ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ (ဥပဒေဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များအပါ အ၀င်) ကိစ္စရပ်များအတွက် ပိုင်ရှင်က စိုက်ထုတ်ကုန်ကျထားရသည်များ အားလုံးကို ပိုင်ရှင်အားပေးချေရန် ဖြစ်သည်။
(ဒ) တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် သို့မဟုတ် မှားယွင်းလုပ်ဆောင်မှု တစ်ခု ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း ထိခိုက်ခြင်း တို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ငှားရမ်းသူသည် ချက်ချင်း ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။ ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက် မရဘဲ မည်သည့်တောင်းဆို ရန်ရှိသည့်အချက်ကိုမျှ မပြုလုပ်ဘဲ (ပိုင်ရှင်ဆန္ဒရှိပါက) စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ (ကုန်ပစ္စည်းနှင့် မပတ်သက်သည့် ငှားရမ်းသူ၏ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်စေမှုနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ နာကျင်စေမှု စသည်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် တောင်းဆိုမှု များမှအပ) ကို ပိုင်ရှင်မှ ဦးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ တရားစွဲဆိုမှု နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုန်ကျစ ရိတ် အားလုံးကို ငှားရမ်းသူမှ ကျခံရမည်။
(ဓ) ကုန်ပစ္စည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ၊ ကဒ်ပြားများ ၊ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများသည် ပိုင်ရှင်ထံတွင် မရှိသေးပါက ယင်း ကုန်ပစ္စည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ၊ ကဒ်ပြားများ ၊ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပိုင်ရှင်ထံသို့ ပေးပို့ရမည်။ ပိုင်ရှင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ၊ ကဒ်ပြားများ ၊ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သဘောတူစာချုပ်ကာလအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်းသူ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့် မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ၊ ကတ် သို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို ငှားရမ်းသူအား ယာယီထုတ်ပေး လိုက်ပါ က ငှားရမ်းသူသည် ပိုင်ရှင်နှင့် သဘောတူထားသည့်အချိန် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်မှ ပြန်လည်တောင်းဆိုသော အချိန်တွင် ငှားရမ်းသူမှ အလျင်အမြန် ပြန်ပေးရန် ကတိပြုသည်။
(န) ငှားရမ်းသူက ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်လျှင် ငှားရမ်းသူသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ၎င်း၏ နှစ်ချုပ် ငွေလက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအမြတ် စာရင်း နှင့် ၀င်ငွေ ဖော်ပြချက်တို့ကို တင်ပြရမည်။ ထို့အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး ခြောက်လအတွင်း ငှားရမ်းသူသည် စာရင်းစစ်ဝင်ထားသည့် ၎င်း၏ အထက်ပါ စာရင်းများ၏ မိတ္တူများအပြင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်များသို့ တင်ပြထားသည့် ၃ လပတ် နှင့်/သို့မဟုတ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာများ နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားသော အစီရင်ခံစာများကိုပါ ပိုင်ရှင်အား တင်ပြရမည်။
(ပ) ဤ စာချုပ်အရသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဤ စာချုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း ငှားရမ်းသူမှ ပိုင်ရှင်ထံ ဥပဒေအရ ပေးရန်လိုအပ်သည့် မည်သည့် အခွန်အခ ၊ ကောက်ခံမှု သို့မ ဟုတ် အဖိုးအခများကိုမဆို ငှားရမ်းသူမှ ပေးဆောင်ရမည်။ ဤ စာချုပ်အရသော်လည်းကောင်း သို့ မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ရှင်မှ မည်သည့် အခွန်အခ ၊ ကောက်ခံမှု သို့မဟုတ် အဖိုးအခ တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါက (ငှားရမ်းသူထံမှ ပိုင်ရှင်က မတောင်းဆိုရန် ဥပဒေအရ တားမြစ် ထားသောကိစ္စရပ်မဟုတ်လျှင်) ယင်းသို့ ပေးဆောင်ရသည့် ငွေပမာဏ အားလုံးကို ပိုင်ရှင်မှ ပြန်တောင်းဆိုလာပါက ငှားရမ်းသူမှ ပြန်ထုတ်ပေးရမည်။
၉.၁ ပိုင်ရှင်သည် ယခုသဘောတူညီမှုစာချုပ်အရ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားတို့ကို ဤ စာချုပ်အရ ယခုပေးချေရမည့် ငွေကြေး သို့မ ဟုတ် နောင်ပေးချေရမည့်ငွေကြေးတို့ နှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့သော်လည်းကောင်း သို့ မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့သော်လည်းကောင်း လွှဲအပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ လွှဲအပ်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း များကို စစ်ဆေးရန် နှင့်/သို့မဟုတ် ပြန်လည်သိမ်းယူရန် အလို့ငှာ အဆောက်အအုံ တစ်ခုနှင့် ယင်း ဥပစာ အား ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၁၀။ ပိုင်ရှင်မှ စာချုပ်အားရပ်စဲခြင်း
၁၀.၁ အောက်ပါဖြစ်ရပ်များထဲမှ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မဆို ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပိုင်ရှင်သည် စာချုး ရပ်စဲ၍ ကုန်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပြန်လည်သိမ်းယူမည် ဖြစ်သည် –
(က) ငှားရမ်းသူမှ သဘောတူစာချုပ်ပါ အရစ်ကျပေးချေမှုများကို ပေးချေရန်ပျက်ကွက်ပြီး ယင်းသို့ ပျက် ကွက်မှုသည် ပိုင်ရှင်မှ သတိပေးအကြောင်းကြားစာ ပို့ပြီးသည့်နောက် အလုပ်လုပ်ရက် (Business Days) ၅ ရက်ထက်မနည်း ဆက်လက်ပျက်ကွက်နေခြင်း)
(ခ) ငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အာမခံသူက ဤ စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာအား ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် စာချုပ်ပါ တာဝန်ဝတ္တရား တစ်စုံတစ်ရာအား လိုက်နာရန် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
(ဂ) ငှားရမ်းသူ၏ သို့မဟုတ် အာမခံပေးသူ၏ ရရန်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျိုးစီးပွားပါဝင်သူတဦးက လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင်၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုနှင့်အပ်နှံသူ၊ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းသူနှင့်/သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ၊ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်အတွက် တရားရုံးက ခန့်အပ်သည့်မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် အလားတူ အရာရှိများကို ခန့်အပ်လျှင် သို့မဟုတ် ယင်းရရန်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတို့ကို သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးသတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း
(ဃ) ငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အာမခံသူတဦးဦးက လူမွဲအဖြစ်ကြေညာခြင်းခံရလျှင် သို့မဟုတ် မြီရှင်များ စည်းဝေးခေါ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် ယင်း၏မြီရှင်များ အကျိုးစီးပွားအတွက် တာဝန်လုပ်ငန်း အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုခု သို့မဟုတ် လွှဲအပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခြင်း
(င) ငှားရမ်းသူသည် ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် ငှားရမ်းသူနှင့် အာမခံသူကဆန္ဒအလျှောက်ဖြစ်စေ မလုပ်မနေရ ဖြစ်စေစာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် လူမွဲစာရင်းအဖြစ်ကြေညာရန် တရားစွဲဆိုမှု စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း
(စ) ဤ သဘောတူ စာချုပ်ပါ အချက်တစ်ခုခုသည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို အကောင်အထည် ဖော်ကျင့်သုံးမရခြင်း သို့မဟုတ် တရားမဝင်ခြင်း စသည်ဖြစ်ခဲ့လျှင်။
(ဆ) ငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အာမခံတစ်ဦးဦးက လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် မရိုးဖြောင့်မှု ကိစ္စရပ်တွင် ပါဝင်ပတ် သက်သည့် အမှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အတွက် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်။
(ဇ) ငှားရမ်းသူ ၊ အာမခံသူတို့၏ အခြေအနေ (ငွေကြေးအရဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ) သိသာစွာ ထိခိုက်သည့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင် ယင်း၏သက်ဆိုင် ရာ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၏ အခြေအနေက ပိုင်ရှင်၏အမြင်တွင် ငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ်/နှင့် အာမခံ သူ၏ လုပ်ကိုင်ဆဲလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးကို သိသာစွာ ထိခိုက်သည့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင်
(ဈ) ငှားရမ်းသူ သို့မဟုတ် အာမခံသူက ၎င်း၏ လုပ်ငန်းကို ရပ်စဲလျှင် သို့မဟုတ် ရပ်စဲပစ်မည်ဟု ခြိမ်း ခြောက်လာလျှင်
(ည) ငှားရမ်းသူက အပ်နှံငွေအဖြစ်ပေးသော သို့မဟုတ် အရစ်ကျ ပေးသွင်းငွေ အဖြစ်ပေးသော သို့မဟုတ် အကြောင်းတစ်ခုဖြင့်ပေးသော ချက်လက်မှတ် တစ်ခုခုသည် ငွေပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း ခံရလျှင်။
(ဋ) ပုံမှန်ဈေးကျခြင်းကြောင့်ထက် ပိုမိုသော ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းလျှော့ကျခြင်း ဖြစ်လျှင်။
(ဌ) ပိုင်ရှင်၏ အမြင်တွင် ဤ သဘောတူစာချုပ်ပါ ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေသည် ထင်လျှင်
စာချုပ်ရပ်စဲမှု အပေါ်တွင် ပိုင်ရှင်၏ အခွင့်အရေးများ
၁၀.၂ ပိုင်ရှင်သည် အပိုဒ်ခွဲ ၁၀.၁ (စာချုပ်အားချက်ချင်းရပ်စဲခြင်း) အရ စာချုပ်အား ရပ်စဲခဲ့သော် ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်း သူ သို့မဟုတ် အာမခံသူ နှင့် ပတ်သက်သည့် အခွင့်အရေးများ နှင့် တောင်းဆိုမှုများကို မထိခိုက်စေပဲ
(၁) ကုန်ပစ္စည်း ၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်သော လိုင်စင်များ ၊ မှတ်ပုံတင် စာအုပ် များ ၊ ကဒ်ပြားများ သို့မဟုတ် ပေါ်လစီ ထောက်ခံစာ လက်မှတ်များ ၊ အာမခံလက်မှတ်များ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြားသော စာရွက်စာတမ်းများ (ရှိခဲ့လျှင်) အားလုံး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်ရယူမည် ဖြစ်သည်။
(၂) ပိုင်ရှင်မှ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအား ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ လျှင် ပိုင်ရှင်မှ အောက်ပါတို့ကို စာဖြင့်ကြေငြာမည် –
(က) ဤ စာချုပ်အရ ဖန်တီးထားသည့် ငှားရမ်းမှုအား ရပ်စဲကြောင်း နှင့် ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းအား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်း
(ခ) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့် အခွင့်အရေးမှ မရှိ တော့ကြောင်း
(င) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းအား လိုအပ်သော လိုင်စင်များ ၊ မှတ်ပုံတင် စာအုပ်များ ၊ ကဒ်ပြားများ သို့မဟုတ် ပေါ်လစီ ထောက်ခံစာ လက်မှတ်များ ၊ အာမခံလက်မှတ် များ ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲများ ၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်များ နှင့် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် သက် ဆိုင်သည့် အခြားသော စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးနှင့်အတူ ပိုင်ရှင်ထံသို့ ပြန်အပ်ရ မည်။
၁၁။ အဆောက်အဦးဥပစာအတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်း
၁၁.၁ အပိုဒ် ၈.၁ (ဇ) ကို မထိခိုက်စေဘဲ ဤစာချုပ်ပါအချက်များနှင့်အညီ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်သိမ်း ယူရန်အလို့ငှာ ပိုင်ရှင် ယင်း၏အလုပ်သမားများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပစ္စည်းများထားသိုရာနေရာ ဖြစ်သည့် ငှားရမ်းသူ၏ နေထိုင်ရာဖြစ်သော အဆောက်အဦးအတွင်းသို့လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပ စ္စည်း အားပြန်လည်သိမ်းယူချိန်တွင် ငှားရမ်းသူမှ ကုန်ပစ္စည်းအား ထားရှိထားသော အခြားသော မည်သည့် နေရာကိုမဆိုလည်းကောင်း ဝင်ရောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၂။ ပိုင်ရှင်သို့ ငှားရမ်းသူ၏လျော်ကြေး
၁၂.၁ အောက်ပါတို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငှားရမ်းသူသည် ပိုင်ရှင်အား အပြည့်အဝ လျော်ကြေးငွေပေးရန် သဘောတူသည်
(က) ဥပဒေဆိုင်ရာ စရိတ်များအပါအဝင် မည်သည့် ပျောက်ဆုံးမှု ၊ ထိခိုက်မှု ၊ ပြန်ပြင်ဆင်မှု ၊ ထိန်းသိမ်းမှု ၊ ပြန်လည်ရယူ ပိုင်ဆိုင် ရန်ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ဤစာချုပ်အား ကျင့်သုံးအ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုတို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ရှင်မှ ပေးဆောင်ခဲ့ရသော သို့မဟုတ် ကျခံခဲ့ရသည့် စရိတ် ၊ ကျသင့်ငွေ ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပေးဆပ်ရန်တာဝန်များ
(ခ) ရဲ သို့မဟုတ် အခြားအစိုးရ အာဏာပိုင်တို့က ကုန်ပစ္စည်းအား မည်သည့်အကြောင်းဖြင့်မဆို သိမ်းယူခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အဖြစ် သို့မဟုတ် ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်မှုတို့၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် ဆုံးရှုံးမှုများ သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများ။ ယင်းသို့ ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည့်တိုင် ငှားရမ်းသူသည် အရစ်ကျငွေပေးချေမှုများအား ပေးချေရ
မည့်အချိန်တွင် ဆက်လက်ပေးချေရမည် ဖြစ်သည်။
(ဂ) လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးဦး (ငှားရမ်းသူအပါအဝင်) မှ ကုန်ပစ္စည်းကို ငှားရမ်းခြင်း ၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ လက်ဝယ်ထားခြင်း ၊ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော ဆုံးရှုံးမှု ၊ ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှုတို့ကြောင့် ပိုင်ရှင်အား တရားစွဲဆိုခြင်း များ ၊ အရေးဆိုခြင်းများ ၊ တောင်းဆိုခြင်းများ နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ပိုင်ရှင်မှ ပေးလျော်ရ သည့် နစ်နာမှု နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံး
၁၃။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင် ငှားရမ်းသူ၏ တာဝန်ရှိမှု
၁၃.၁ ပိုင်ရှင်က ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်ရယူလျှင် ပိုင်ရှင်သည် အောက်ပါတို့နှင့် ညီမျှသော ငွေပမာဏကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေးအဖြစ် ငှားရမ်းသူထံမှ ပြန်လည်ရယူခွင့်ရှိသည် –
(က) စာချုပ်၏ အပိုဒ် (၅) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ပေးချေရမည့် စုစုပေါင်းငွေပမာဏ နှင့် အပိုဒ် (၅) အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဒဏ်ကြေးတစ်ခုခုထဲမှ
(ခ) ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ရယူချိန်တွင် ပိုင်ရှင်မှ လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သော အရစ်ကျပေးချေမှုများ နှင့် ဒဏ် ကြေးများအပြင် ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ခုနှိမ်ထားထားသော ပမာဏ
၁၄။ ပြန်လည်ရယူသော/ပြန်လည်ပေးအပ်သော ပစ္စည်းတွင် ပါရှိလာသည့် ပစ္စည်းများ
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပါသည့် ပစ္စည်းများ
၁၄.၁ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူ သို့မဟုတ် ပြန်အပ်သည့်ကိစ္စတွင် ပိုင်ရှင်သည် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် အ တူ ကျန်ရစ်သော သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူက ကုန်ပစ္စည်းတွင်တပ်ဆင်ထားသော မည်သည့်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကိရိယာအတွက်ကိုမျှ တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ပစ္စည်းအား ရောင်းချခြင်း နှင့် ရှင်းထုတ်ခြင်း
၁၄.၂ ပိုင်ရှင်မှ ယင်းသို့သော ပစ္စည်းကို ကုန်ပစ္စည်း နှင့် အတူတွေ့ရှိရသော်လည်း ယင်းပစ္စည်းသည် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်ထားခြင်းမရှိလျှင် ပစ္စည်းပြန်လည်ရယူ သို့မဟုတ် ပြန်ပေးအပ်သည့်နေ့မှ ၇ ရက်အတွင်း ငှားရမ်းသူက ပြန်လည်ယူဆောင်နိုင်သည်။ ငှားရမ်းသူမှ ၇ ရက်အတွင်း ပြန်လည် ယူဆောင်ခြင်းမရှိလျှင် ယင်း ပစ္စည်းအား ပိုင်ရှင်မှ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ရှင်းထုတ်ပစ်မည် ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်မှ ယင်းပစ္စည်းကို ရောင်းချခဲ့လျှင် အသားတင်ရောင်းရငွေအား ငှားရမ်းသူ၏ ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းမည်။ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ပါလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်ထား ခြင်းမရှိသည့် ပစ္စည်းအားရောင်းချရာတွင် အမြတ်အစွန်းများနိုင်သမျှများအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပိုင်ရှင်တွင် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာမရှိပေ။
ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ရှင်းထုတ်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေး
၁၄.၃ အပိုဒ် ၁၄.၂ (ပစ္စည်းအား ရောင်းချခြင်း နှင့် ရှင်းထုတ်ခြင်း) အရ ပစ္စည်းတစ်ခုခုအား ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ရှင်းထုတ်ခြင်းအတွက် တတိယလူတစ်စုံတစ်ယောက်က အကျိုးအမြတ် တောင်းဆိုမှုရှိပါ က ငှားရမ်းသူက ပိုင်ရှင်အား ပေးလျော်ရပါမည်။
၁၅။ ကုန်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်း
၁၅.၁ ကုန်ပစ္စည်း ခိုးယူခံရခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခြင်းတို့သည် ဤစာချုပ်အရ ငှားရမ်း သူတွင် တာဝန်ရှိသည့် ပေးရန်တာဝန်များကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်း အခိုးခံရခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခြင်းတို့သည် ဤ စာချုပ်အား ပျက်ပြယ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ ခိုးယူခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည့်တိုင် ငှားရမ်း သူသည် ပေးဆပ်ချိန်စေ့ရောက်ပါက ငှားရမ်းသူ၏ အရစ်ကျပေးဆပ်ငွေ အားလုံးကို ဆက်လက်ပေး ဆပ်ရမည်။
၁၅.၂ ဤ စာချုပ်သက်တမ်းကာလအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးခြင်း ၊ အခိုးခံရခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့လျှင် ယင်းသို့သော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုသည် ပိုင်ရှင်တစ်ဦး တည်း၏ ထင်မြင်ချက်အရ ပြန်လည်အစားထိုး၍ ပြန်လည်ပြုပြင်၍ ရနိုင်မည်ဆိုပါက ဤ ကိစ္စတွင် အပိုဒ် ၈ (ဆ) ကို မထိခိုက်စေပဲ အာမခံပေါ်လစီအရ ပိုင်ရှင်အားပေးရမည့် အာမခံငွေများကို ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုရမည်။
ပြန်လည်အစားထိုးမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြုပြင်မှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
၁၅.၃ ပိုင်ရှင်၏ ထင်မြင်ယူဆချက်အရ ကုန်ပစ္စည်းများသည် ပြန်လည်အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့လျှင် အာမခံပေါ်လစီများအရ ပိုင်ရှင်အားပေးရမည့် အာမခံငွေအားလုံးကို အောက်ပါအတိုင်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးရမည် –
(က) ပထမဆုံးအားဖြင့် ဤ စာချုပ်၏ အပိုဒ် ၅ တွင် ဖော်ပြထားသည့် မပေးချေရသေးသည့် သေးသည့် လက်ကျန်ငွေကို ဤ စာချုပ်အရ ပိုင်ရှင်အားပေးရမည့် ဒဏ်ကြေးအားလုံး နှင့် အခြားသော ပေးချေရမည့် ငွေကြေးအားလုံးကိုပါ ပိုင်ရှင်သို့ ပေးချေရန်။
(ခ) ဒုတိယအားဖြင့် ပိုင်ရှင်မှ ကျခံထားရသည့် တရားစရိတ်များကို ပေးချေရန်နှင့်
(ဂ) တိတယအားဖြင့် လက်ကျန်ငွေကို ငှားရမ်းသူသို့ ပေးချေ ရန်ဖြစ်သည်။
၁၅.၄ အပိုဒ် ၁၅.၁ (တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်မပြုခြင်း) တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ပေါ်လစီအရ ပိုင်ရှင်မှ အာမခံ ပိုက်ဆံများကို လက်ခံရရှိပြီးသည့်နောက်တွင် အောက်ပါတို့ကို မပေးချေရသေးပါက ပိုင်ရှင်အား ပေးချေပေးရန် ငှားရမ်းသူတွင် တာဝန်ရှိသည် –
(က) ဤ စာချုပ်၏ အပိုဒ် ၅ တွင် ဖော်ပြထားသည့် လက်ကျန်ငွေများ သို့မဟုတ်
(ခ) ဤ စာချုပ်အရ ပေးရန်ရှိသည့် ဒဏ်ကြေးများ နှင့် အခြားသော ပေးရန်ရှိသည့် ငွေကြေး များ
၁၆။ ငှားရမ်းမှုကာလသက်တမ်း ပြီးဆုံးခြင်း
အကယ်၍ ဤ သဘောတူစာချုပ်ပါ အတည်အလင်းဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထား သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအားလုံးကို စာချုပ်သက်တမ်းပြီးဆုံးသည်အထိ တိကျစွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအထိ ပိုင်ရှင်အား ပေးဆပ်ရမည့် ငွေအားလုံးကို ပေးဆပ်ရ မည့် အချိန်စေ့သည်နှင့် ပေးဆပ်ခဲ့လျှင် ငှားရမ်းသူက အောက်ဖော်ပြပါ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်
(က) ပထမရွေးချယ်မှုမှာ ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်ထံသို့ ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုန်ပစ္စည်းသည် ကျေနပ်ဖွယ် အခြေအနေတွင်ရှိလျှင် သဘောတူ စာချုပ်ပါ အချက် ၂ အရ ကနဦးစရံငွေအား ငှားရမ်းသူသို့ ပြန်အမ်းပေးပါမည်။
(ခ) ဒုတိယရွေးချယ်မှုမှာ ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူပြီး ကုန်ပစ္စည်းအား လုံးဝပိုင် ဆိုင်သည့်သူ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၀ယ်ယူသည့်အတွက် အဖိုးစားနားအဖြစ် ငှားရမ်းသူ သည် သဘောတူစာချုပ်တွင် ရေးသွင်းထားသည့် လစဉ်ပေးချေရမည့် ငွေပမာဏကို ပြန်အမ်းရန်မဟုတ်သည့် စရန်ငွေနှင့် ပြန်အမ်းရန်မဟုတ်သည့် ငှားရမ်းခ ပုံစံဖြင့် ပေးချေ နေသည်ဟု သိထားရပါမည်။
ပိုင်ရှင်အား အခွင့်အရေးပေးထားသည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
၁၇.၁ ပိုင်ရှင်အား အခွင့်အရေးပေးထားသည့် ဤ သဘောတူညီမှုပါ စည်းကမ်း စည်းမျဉ်းများသည် ၎င်းအား အခွင့်အရေးပေးရာရောက်သည့် စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမဆန့် ကျင်သရွေ့ ထပ်မံပေါင်းစပ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို အစားထိုးမည် မဟုတ် ပေ။
သွယ်ဝှက်ညွှန်းဆိုသည့် ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ရှိများ ဤ စာချုပ် နှင့် မသက်ဆိုင်ခြင်း
၁၇.၂ သဘောတူစာချုပ်တွင် အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားလျှင် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ယင်း ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ ရောင်းချနိုင်သည့် အရည်အသွေး သို့မဟုတ် သင့်တော် ကောင်းမွန်မှု သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီမှုတို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း ပိုင်ရှင်မှကျခံရမည့် အတိအလင်းဖြစ်သော သို့မဟုတ် သွယ်ဝှက် ညွှန်းဆိုထားသော မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမဆို ဤ စာချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
ငှားရမ်းသူ၏ ကင်းလွတ်ခွင့်များ ဤ စာချုပ်နှင့် မသက်ဆိုင်ခြင်း
၁၇.၃ သဘောတူစာချုပ်တွင် အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားလျှင် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ယင်း ကုန်ပစ္စည်းတို့၏ ရောင်းချနိုင်သည့် အရည်အသွေး သို့မဟုတ် သင့်တော် ကောင်းမွန်မှု သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့်ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီမှုတို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍သော်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ၊ အာမခံချက်များ ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ခံကိတိပြုမှုများ နှင့် ပတ်သက်၍ ငှားရမ်းသူမှ ရရှိမည့် အတိအလင်း သို့မဟုတ် သွယ် ဝှက်ညွှန်းဆိုထားသော မည်သည့် အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုမဆို ဤ စာချုပ် နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ကွဲလွဲနေခြင်း
၁၇.၄ သဘောတူစာချုပ်တွင် အခြားနည်းဖြင့် မဖော်ပြထားလျှင် ပေးပို့လိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသည် စာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ဖော်ပြချက်များ နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ပိုင်ရှင်တွင် မည်သည့် တာဝန်မှ မရှိသည့်အပြင် ငှားရမ်းသူအနေဖြင့် စာချုပ်အား ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် ပိုင်ရှင်တွင် တာဝန်မရှိခြင်း
၁၇.၅ စာချုပ်ပါ ဖော်ပြချက်များ နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသည့် ကုန် ပစ္စည်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့အတွက် စာချုပ်အရသော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် တရားမနစ်နာမှုအရအသော်လည်းကောင်း ပိုင်ရှင်ကို တာဝန်မရှိ စေရပါ။ ငှားရမ်းသူမှ စစ်ဆေးရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းမှာ စာချုပ်ပါ ဖော်ပြချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းခြင်းတို့သည် ထင်ရှားသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မထင်ရှားသည်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင် ခြင်းမရှိစေရ။
ငှားရမ်းသူထံ တောင်းဆိုမှုများသည် ပိုင်ရှင်နှင့် မသက်ဆိုင်ခြင်း
၁၇.၆ မည်သည့် အခြားသူ တစ်ဦးဦးကမဆို မည်သည့် ဆုံးရှုံးမှု ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက်မဆို ငှားရမ်းသူထံတောင်းဆိုသည့် တောင်းဆိုမှုများအတွက် ပိုင်ရှင်တွင် တာဝန်မ ရှိပါ။
ရောင်းဝယ်သူများဖြစ်သည် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူများ မဟုတ်ပါ
၁၇.၇ ဤသဘောတူ စာချူပ်တွင် အခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ဤ စာချုပ်အတွက် ညှိနှိုင်းရာ တွင်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရာတွင်လည်းကောင်း ပါဝင်သည့် ရောင်းဝယ်သူ များ ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ ၊ ကြွေးမြီပွဲစားများ နှင့် စာချုပ်ဝင် များ၏ ဝန်ထမ်းများသည် ပိုင်ရှင် ၏ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သူများ မဟုတ်ကြပါ။
ရရှိထားသော အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
၁၈.၁ အခွင့်အရေး စွှန့်လွှတ်ကြောင်း စာဖြင့်ဝန်ခံခြင်းမရှိလျှင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူဖြစ်စေ ဤ စာချုပ်အရ ရရှိထားသော အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက် ခြင်းသည် ယင်းအခွင့်အရေးများကို စွှန့်လွှတ်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ စာချုပ်ဝင်များအကြား မည်သည့် ပုံစံ ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ယင်းပုံစံသည် ဤ စာချုပ်ပါအခွင့်အရေးများအား စွှန့်လွှတ်ရာ ရောက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ ဤ သဘောတူ စာချုပါ အခွင့်အရေးများ နှင့် ကုစားမှုတို့သည် တစ်ခုအ ပေါ်တစ်ခု အခြေခံတည်ရှိပြီး အခွင့်အရေး နှင့် ကုစားမှုများသည် သီးခြားတည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ပါ (ဥပဒေအရဖြစ်စေ အခြားနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ)
၁၈.၂ ငှားရမ်းသူက ဤ သဘောတူစာချုပ်၏ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို တစ်စုံတစ်ရာ ချိုးဖောက် ခြင်းအား အရေးယူနိုင်ခွင့်ကို ပိုင်ရှင်မှ စွှန့်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သဘောတူခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ဤ သဘောတူစာ ချုပ်၏ မည်သည့် သတ်မှတ်ချက်အရမဆို ပိုင်ရှင်ကပေးသည့် မည်သည့် အခွင့်အ ရေးစွှန့်လွှတ်မှုမျိုး သို့မဟုတ် သဘေတူညီ ခွင့်ပြုခြင်းကိုမဆို စာဖြင့်ရေးသားမှသာ အကျိုးရောက်မှု ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုင်ရှင်က သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော မည်သည့်အခြေအနေမျိုးကိုမဆို ပိုင်ရှင်မှ အခွင့်အရေး စွှန့်လွှတ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် သဘောတူညီ ခွင့်ပြုမှု တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ခွင့်ပြုခြင်းသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အကျိုး သက်ရောက်သည်။
ပေးထားသော အချိန် နှင့် လိုက်လျောမှု
၁၈.၃ ဤ သဘောတူ စာချုပ်အရ ပိုင်ရှင်၏ မည်သည့်ပေးရန် တာဝန်ကိုမဆို ပိုင်ရှင်၏ တစ်ဦးတည်း ဆုံး ဖြတ်ချက်ဖြင့် တစ်စုတစ်စည်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖြေလျော့ခြင်း ၊ ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် သဘောတူ ညှိနှိုင်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူ နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ရှင်က အချိန်ပေခြင်း သို့မဟုတ် လိုက်လျောခြင်းတို့က တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပိုင်ရှင်က ငှားရမ်းသူအား တူညီ သောအခြေအနေ သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် အရေးယူနိုင်သော အခွင့်အရေး ကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိစေရ။
၁၉။ ငှားရမ်းသူမှ စာချုပ်အား ရပ်စဲခြင်း
စောလျင်စွာ ငွေအကြေချေ၍ စာချုပ်အား ရပ်စဲခြင်း
၁၉.၁ ငှားရမ်းသူသည် အငှားသက်တမ်းကာလအတွင်း ယခုသဘောတူညီမှု စာချုပ်အရ ၎င်း၏ ပျက်ကွက် မှုတို့အတွက် ပြန်လည်ပေးလျော်ပြီး အခန်း (က) နှင့် အညီတွက်ချက်ထားသော ငွေပမာဏကို စော လျှင်စွာ ပေးဆောင်က ရွေးချယ်ရန် နှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဝယ်ယူရန် ရွေး ချယ်ခဲ့လျှင် ငှားရမ်းသူသည် အချက် ၂ တွင် ဖော်ပြထားသော စရံငွေကို စွှန့်လွှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်းသူတောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ အခွင့်အရေး ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် နှင့် အကျိုးစီးပွားအားလုံးကို ငှားရမ်းသူထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပိုင်ရှင် မှ မလွှဲပြောင်းပေးမီ အချိန်အထိ ပိုင်ရှင်သည်သာ ကုန်ပစ္စည်း၏ တစ်ဦးတည်းသော ပိုင်ဆိုင်သူအ ဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေမည် ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူမှု သဘောတူညီမှုစာချုပ် မဟုတ်ပါ
၁၉.၂ ဤ သဘောတူစာချုပ်သည် ဝယ်ယူမှု သဘောတူစာချုပ်မဟုတ်ပါ။ ဤ စာချုပ်သည် ငှားရမ်းသူမှ ကုန်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူသည့် သဘောတူစာချုပ်လည်း မဟုတ်ပါ။
လက်ရောက်ပေးအပ်၍ စာချုပ်အား ရပ်စဲခြင်း
၁၉.၃ ရွေးချယ်ရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ ငှားရမ်းသူသည် ပိုင်ရှင်ထံသို့ အောက်ပါတို့ကို သာမာန် အလုပ်ချိန် အတွင်း လက်ရောက်ပေးအပ်၍ စာချုပ်အား ရပ်စဲနိုင်သည် –
(က) မှန်ကန်၍ ကောင်းမွန်သော အခြေအနေရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်း
(ခ) ကုန်ပစ္စည်းတွင် ငှားရမ်းသူမှ ထပ်ထည့်ထားသည့် ပစ္စည်းများ ၊ ပြောင်းလဲထည့်သွင်းထား
သည့် ပစ္စည်းများ ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ထားသည့် ပစ္စည်းများအားလုံး အပြင်
(ဂ) ကုန်ပစ္စည်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်များ ၊ မှတ်ပုံတင် စာအုပ်များ/ကဒ်ပြားများ သို့မ ဟုတ် ထောက်ခံချက်များ ၊ မူဝါဒများ နှင့် အာမခံလက်မှတ်များ ၊ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်များ ၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်လေးများ နှင့် အခြားသောစာရွက်စာတမ်းများ (ရှိလျှင်)
ပေးရန်ရှိသော အဖိုးအခများအား ပေးချေမှု
၁၉.၄ စာချုပ်ရပ်စဲလျှင် အပိုဒ် ၁၃ (ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင် ငှားရမ်းသူ၏ တာဝန်ရှိမှု) တွင် ဖော်ပြထားသည့်နေ့တွင် ပိုင်ရှင်မှ ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိလျှင် ပိုင်ရှင်မှ ငှားရမ်းသူထံမှ ရရှိရမည့် ငွေပမာဏအတိုင်း ငှားရမ်းသူမှ ပိုင်ရှင်အားပေးဆောင်ရမည်။
၂၀။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂၀.၁ ပိုင်ရှင် နှင့် ငှားရမ်းသူတို့သည် (ငှားရမ်းသူသည် ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့လျှင်) လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဤ စာချုပ်အရ အခွင့်အရေးများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများသည် အပြည့် အဝ ပကတိအတိုင်းရှိနေလျှင် ယင်းသို့ လုပ်ငန်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းများသည် စာချုပ်အား ချိုး ဖောက်ရာရောက်သည်ဟု စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
အတုပြုလုပ်ထားခြင်း နှင့် သိသာထင်ရှားသော အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ရှိသည်မှလွဲ၍ ဤ သဘောတူ စာချုပ် နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပိုင်ရှင်၏မှတ်တမ်းများ အားလုံး (အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ကွန်ပျူတာနှင့် မိုက်ကရိုဖလင်စသည့် ထည့်သွင်းထားသော မှတ်တမ်းများအပါအ၀င်) နှင့် ငှားရမ်းသူက ပိုင်ရှင်သို့ ပေးရန်တာဝန်များကို ဖော်ပြသည့် စာရွက်စာတမ်း လက်မှတ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော နေ့ရက်တွင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို နောက်ဆုံး၊ အပြီးသတ်၊ စည်းနှောင်မည် ဖြစ်သည်။
၂၂.၁ ငှားရမ်းသူသည် လိပ်စာပြောင်းလဲမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ယင်းကို ပိုင်ရှင်အား စာဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။
၂၂.၂ မည်သည့် နို့တစ်စာ၊ တောင်းဆိုချက် ၊ ဆင့်စာ ၊ ရရန်ရှိငွေကြေးအား ဥပဒေအရ တောင်းခံလွှာ ၊ ဒေဝါလီခံမှုလျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှု ၊ အရေးယူမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှု (ဥပဒေဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှု နှင့် ဒေဝါလီခံမှုအား တရားစွဲဆိုခြင်းများ အပါအဝင်) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒေဝါလီခံမှု ဆင့်စာကိုမဆို သို့မဟုတ် အခြားသော မည်သည့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုချက် ကိုမဆို ငှားရမ်းသူထံ ပိုင်ရှင်က အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့မည်ဖြစ်သည် –
(က) ငှားရမ်းသူ၏ အရာရှိများ သို့မဟုတ် စီးပွားဖက်များ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူကိုင်တိုင်သို့ ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဆက်သားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ခြင်း
(ခ) ငှားရမ်းသူသို့ လိပ်မူပြီး ငှားရမ်းသူ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ရုံးလိပ်စာ သို့မဟုတ် ပင်မအလုပ် နေရာ သို့မဟုတ် ဤစာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော ယင်း၏လိပ်စာ (သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အား စာဖြင့် ရေးသားအကြောင်းကြားခဲ့သည့် ပြောင်းရွေ့လိပ်စာ) သို့ စာတိုက်မှ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ်
(ဂ) အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အခြားသော အီလက်ထရွန်နစ် စာပို့နည်းလမ်းများ ဖြင့် ပေးပို့ခြင်း
၂၂.၃ ထို့အပြင် နို့တစ်စာပေးပို့ပြီးပါက အောက်ပါအချိန်များတွင် ငှားရမ်းသူသည် နို့တစ်စာအား လက်ခံရ ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် –
(က) ငှားရမ်းသူ၏ အရာရှိများ သို့မဟုတ် စီးပွားဖက်များ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူကိုင်တိုင်သို့ ပေးပို့ ခြင်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အခြားသော အီလက်ထရွန်နစ် စာပို့နည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့ခြင်းဆိုလျှင် ပေးသည့်အချိန်တွင်လည်းကောင်း
(ခ) မြန်မာပြည်တွင်းမှ လိပ်စာသို့ ပေးပို့ခြင်းဆိုလျှင် စာတိုက်မှ ပို့ပြီးနောက်နေ့ အလုပ်ဖွင့်ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင်လည်းကောင်း
(ဂ) မြန်မာပြည် ပြင်ပမှ လိပ်စာသို့ ပေးပို့ခြင်းဆိုလျှင် စာတိုက်မှပို့ပြီး တတိယမြောက် အလုပ်ဖွင့် ရက် (စာပို့သည့်နေ့ မပါဝင်ပါ) နံနက် ၁ဝ နာရီတွင်လည်းကောင်း
၂၂.၄ အထွေထွေစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားသော နောက်ဆုံးရ အခြေအ နေများ နှင့် ငှားရမ်းမှု နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခြားသော အရေးကြီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းသူထံသို့ ပေးပို့နိုင်သည် –
(က) ယင်းအပြောင်းအလဲများကို ပိုင်ရှင်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တင်ပေးခြင်း
(ခ) အပိုဒ် ၂၂.၂ (နို့တစ်စာ ပေးပို့ခြင်း) ပါ နည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် ပေးပို့ခြင်း
(င) ပိုင်ရှင်က ၎င်း၏ အကြွင်းမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းများဖြင့် ပေးပို့ခြင်း
၂၃။ အတည်မဖြစ်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု
၂၃.၁ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်တစ်ခုတွင် ဤ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခုသည် တရားမဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် အတည် မဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ယင်း တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်၏ တရားမဝင်သည့် သို့မဟုတ် အတည်မ ဖြစ်သည့် အတိုင်းအတာကိုသာ ဖယ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း ပြုလုပ်ရ မည်
(ခ) ယင်းသို့ တရားမဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် အတည်မဖြစ်ခြင်းသည် –
(၁) အခြားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် နယ်ပယ်တွင် အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်၏ တရားဝင်မှု သို့မ ဟုတ် အတည်ဖြစ်မှုကို မထိခိုက်စေရ
(၂) ကျန်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်များ၏ တရားဝင်မှု သို့မ ဟုတ် အတည်ဖြစ်မှုကို မထိခိုက်စေရ
၂၄။ စာချုပ်တစ်ခုလုံး ပါဝင်မှု
၂၄.၁ ဤ စာချုပ်သည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အလုံးစုံသော သဘောတူညီမှု နှင့် နားလည်မှု ဖြစ်သည့်အပြင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် စာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ယခင်က ဆောင်ရွက်ထားသည့် မည်သည့် သဘေတူညီမှုကိုမဆို အစားထိုးပြီးဖြစ်သည်။
၂၅.၁ ပိုင်ရှင်သည် ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာ များကို ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာများကို ဤသဘောတူ စာချုပ်အရ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် တရား ဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ခန့်အပ်နိုင်သည်။
၂၆.၁ ပိုင်ရှင်မှ သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအား ပိုင်ရှင်မှသော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်၏ အရာရှိ တစ်ဦးဦးမှသော်လည်းကောင်း ငှားရမ်းသူ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို ဖွင့်ဟနိုင်သည်ကို ငှားရမ်းသူမှ သဘောတူပါသည် –
(က) သိရှိရန်ခွင့်ပြုခြင်း ခံထားရသည့် မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို သို့မဟုတ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ခု ခုအရသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရသော်လည်းကောင်း ဖွင့်ဟရမည့် မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်မဆို သို့မဟုတ်
(ခ) အခြားမည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို မည်သည့် အကြောင်းကိစ္စဖြင့်မဆို
ကြွေး မြီ သုတေသန ဗျူရိုများသို့ ဖွင့်ဟမှု
၂၆.၂ အပိုဒ် ၂၆.၁ (ယေဘုယျအားဖြင့် ဖွင့်ဟမှု) အား မထိခိုက်စေပဲ ကြွေးမြီသုတေသနဗျူရို တစ်ခုခု သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကြွေးဆပ်နိုင်မှုအခြေအနေ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စု ဆောင်းခြင်း နှင့် ပံ့ပိုးခြင်းကိစ္စရပ်များအတွက် တည်ထောင်ထားသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုခုသို့လည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ငှားရမ်းသူမှ သဘောတူ သည့်အပြင် ယင်း ကြွေးမြီသုတေသနဗျူရို တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မ ဟုတ် ကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုခု မှ ငှားရမ်းသူ၏ ကြွေးဆပ်နိုင်မှုအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် တခြားမည်သည့် အကြောင်းဖြင့်မဆို ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ငှားရမ်းသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်း ငှာရမ်းသူမှ သဘောတူသည်။
၂၆.၃ ဤ စာချုပ် ရပ်စဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသူ နှင့် ပိုင်ရှင်ကြား မည်သည့်အကြောင်းဖြင့်မဆို ဆက်ဆံရေးကို ရပ်စဲလိုက်သည့်တိုင် ဤ သဘောတူမှု နှင့် သတ်မှတ်ချက်သည် ဆက်လက်၍ အသက်ဝင်နေမည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်နှင့်ဖွင့်ထားသည့် ငှားရမ်းသူ၏ ငွေစာရင်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ငွေ စာရင်းအားလုံးသည်လည်း ဆက်လက်အသက်ဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။
ဤ စာချုပ် နှင့် အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရာတွင် အောက် ပါ အယူအဆများ နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအား အသုံးပြုရမည်
(က) ဧကဝုစ်တွင် ဗဟုဝုစ်လည်း ပါဝင်သကဲ့သို့ ဗဟုဝုစ်တွင်လည်း ဧကဝုစ်လည်းပါဝင်သည်
(ခ) လိင်သည် လိင်အားလုံး ပါဝင်သည်
(ဂ) ငှားရမ်းသူဟူသော စကားရပ်တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး နှင့် အထက် ပါဝင်ပါက ယင်း လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပူးတွဲအနေဖြင့်သော် လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဂ) “ အလုပ်ဖွင့်ရက်” ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်မှတပါး အခြားရက်များကိုဆိုလိုပါသည်။
(ဃ) “ MMK” ဆိုသည်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်ပါသည်။
(င) “ အာမခံသူ” ဆိုသည်မှာ သဘောတူစာချုပ်အရ ပိုင်ရှင်အတွက် အာမခံပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ပုံစံဖြင့်မဆို ပိုင်ရှင်ကို ထောက်ခံသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အတွက် အာမခံပစ္စည်းပေးသော မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် စာချုပ်ဝင်ကိုမဆို ဆိုလို သည်။
(စ) ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စာပိုဒ်ခေါင်းစဉ်များမျာ ကြည့်ရှုကိုးကားရာတွင် လွယ်ကူစေရန်အ တွက် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဤသဘောတူစာချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူမှုကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အကျိုးသက်ရောက်စေမည် မဟုတ်ပါ။
၂၈။ ၀န်ခံသဘောတူခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် အာမခံချက်များ
၂၈.၁ လွဲမှားကောက်ယူခြင်း မရှိစေရန် အလို့ငှာ ငှားရမ်းသူသည် ဤနေရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ၀န်ခံသဘောတူ အတည်ပြုပါသည်။
(က) ကုန်ပစ္စည်းများ သည် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထား နှင့် ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိသည့်အပြင် ကုန်ပစ္စည်းများသည် အဖက်ဖက်မှ ငှားရမ်းသူအား အကြိုက် ဖြစ်ကြောင်း ငှားရမ်းသူမှ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။
(ခ) ဤသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့တွင် ငှားရမ်းသူလက်ခံရရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထား နှင့် ကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိသည်။
ကိုယ်စားပြုခြင်း နှင့် အာမခံခြင်း
၂၈.၂ ငှားရမ်းသူ သည်ပိုင်ရှင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် အာမခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေး ပါသည် –
(က) အခွင့်အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ။ ။ ငှားရမ်းသူသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် နှင့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့်အပြင် ဤ စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု ၊ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာမှု ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆို ထားသော စာချုပ်အား ပေးအပ်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရ မည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို တရားဝင်ခွင့်ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ထား သူ ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ဥပဒေအရတရားဝင်ဖြစ်ခြင်း ။ ။ ဤသဘောတူ စာချုပ်သည် ယင်း၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း တရားဝင် အတည်ဖြစ်ပြီးသော လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည့် ဝတ္တရားများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်။
(ဂ) ခွင့်ပြုမိန့်များ။ ဤ စာချုပ်အား ချုပ်ဆိုခြင်း ၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း ၊ စာချုပ်အာဏာတည်စေခြင်းတို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် သဘောတူညီချက်များ ၊ အတည်ပြုချက်များ ၊ ခွင့်ပြုမိန့်များ နှင့် ဤ စာချုပ်အရ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် လိုအပ်သည့် သို့မ ဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် သဘောတူညီချက်များ ၊ အတည်ပြုချက်များ ၊ ခွင့်ပြုမိန့်များ အားလုံးကို ရရှိထားပြီးဖြစ်သည် သို့ မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဆက်လက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
၂၉.၁ ဤသဘောတူစာချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ အနက်အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူရမည်။ ဤတွင် စာချုပ်ဝင်တို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ သီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိသော တရားရုံးများသို့ တင်သွင်းကြသည်။ သို့ရာတွင် ပိုင်ရှင်က အခြားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သည့် မည်သည့်တရားရုံးတွင်မဆို ငှားရမ်းသူအား တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃၀။ စာချုပ်များ (တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်၏အခွင့်အရေးများ)
၃၀.၁ ဤသဘောတူစာချုပ်တွင် မပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက် တစ်ခုခုကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ဤ စာချုပ်အရ အခွင့်အရေးမရှိပါ။
၃၁.၁ ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ဤ စာချုပ်၏ အထွေထွေ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကိုသော်လည်းကောင်း/ ဤ စာချုပ်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကိုသော် လည်းကောင်း (သဘောတူစာချုပ် တွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကိုသော် လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကိုသော်လည်းကောင်း) ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပြီး ငှားရမ်းသူသည် ယင်းပြင်ဆင်ချက်အား လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည့် အပြင် ပြင်ဆင်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နို့တစ်စာအား အပိုဒ် ၂၂.၂ (နို့တစ်စာပေးခြင်း) နှင့်အညီ ငှားရမ်းသူ ထံသို့ပေးပို့ချိန်မှစ၍ လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။